AmaLeashes amahle kakhulu wokuziqeqesha: Ungayisebenzisa kanjani nokuthi yini okufanele uyazi | Izinja Umhlaba
USusana godoy | | Izesekeli zezinja, Ukuziqeqesha
Ibhande lokuqeqesha lingesinye isici okufanele nathi sisondele kakhulu kuso. Kepha yize kungazwakala kungazelelwe, kuyiqiniso ukuthi ngelinye lamathuluzi awathandayo ngoba kuzokwakha ukuxhumana okungewona amagama phakathi komnikazi nesilwane sakhe. Ngakho-ke, kufanele futhi unake ngokukhethekile ukunyakaza ngakunye.
Kepha kuyinto esizobona kamuva futhi ngenxa yalokho, kuzosisiza ukuba siqonde kancane imisebenzi eyisisekelo yomkhiqizo oshiwo. Ngomugqa wokuqeqesha siqinisekisa ukuthi izilwane zethu zivikelekile njaloNgakho-ke, kufanele ngaso sonke isikhathi sikhethe okungcono kakhulu kubo.
1 Yini i-leash yokuqeqesha inja
2 Ibhande lokuqeqesha kufanele libe yinde kangakanani?
3 Ungayisebenzisa kanjani i-leash yokuqeqesha ukuqeqesha inja yethu
4 Kufanele siqale nini ukusebenzisa ibhande lokuqeqesha?
5 Ungathenga kuphi i-leash yokuqeqesha inja
Yini i-leash yokuqeqesha inja
I-Looxmeer Belt ...
I-Dapzon Dog Leash, 10m ...
Inhloso yokuqeqeshwa kwenja ukufundisa isilwane sakho. Kepha futhi kugxile ekuyilawuleni, ikakhulukazi lapho uphuma uyobethwa ngumoya noma mhlawumbe ngesikhathi sokuzivocavoca umzimba. Ngakho-ke, sithola ukuthi inengwegwe yokuyibamba engxenyeni yesiphika senja bese isiphetho esihle ngakolunye uhlangothi lapho singayiphatha khona ngaphandle kwenkinga.
Ngakho-ke, uma sikhuluma ngokubanzi, singakusho lokho ukusetshenziswa kwayo kugxile ekuthuthukiseni indlela yokuziphatha kwezilwane ezifuywayo, kanye nokuphepha kwazo.
Ibhande lokuqeqesha kufanele libe yinde kangakanani?
Akuwona umbuzo esingawuphendula ngendlela ecashile. Kungani? Yebo, ngoba konke kuzoya ngosayizi wenja ikakhulukazi. Ngisho, ukuqala udinga ukwazi kokubili isisindo nosayizi ngisho nokuphakama koboya bakho. Ngale ndlela usuvele ungathola umbono wokuthi yini ayidingayo, ngoba akuzona zonke izinja ezifanayo, noma ngezilinganiso noma ngobumnene.
Ngakho-ke, kufanele kuthiwe inja idinga ukuhamba ngokukhululeka kepha futhi, isishiye sinethezekile, ngakho-ke ubude obuncane kufanele bube cishe amamitha ama-5, okuyizinto okuthiwa ezejwayelekile. Kubalulekile ukuthi uma inja yakho incane ayidluli lobu bude futhi ukhumbule ukuthi kuhlala kungcono ukuthi ibe mncane kancane. Ngenkathi ukuthi uma inja icishe ibe ngama-kilos angama-20, lapho-ke udinga i-leash ejiyile ngoba sizodinga ukumelana okwengeziwe kepha ubude obungamamitha amathathu banele.
Ukubuyela ezinjeni eziphakathi noma ezincane, siyazi ukuthi bathambekele ekuphelelweni isineke, ukuthi bayathanda ukuhogela nokudlala kuzo zonke izinyathelo, ngakho-ke kungcono ukubheja eyodwa enwebekayo. Ngenkathi labo abadonsa kakhulu kwi-leash, ngaso sonke isikhathi kungcono ukugqoka ngayo kufushane. Ngaleyo ndlela sigwema amajezi athile lapho singanaki. Izinja ezinkulu, zokulandela ngomkhondo noma ukuthatha uhambo lokuzulazula endaweni engenabantu abaningi, noma kungeyona efanelekile kunazo zonke, ungasebenzisa imichilo yamamitha angaphezu kwama-20 okuyizikhathi ezengeziwe.
Ungayisebenzisa kanjani i-leash yokuqeqesha ukuqeqesha inja yethu
Njengakuzo zonke izigaba zokuphila, i-leash yokuqeqesha nayo idinga imihlahlandlela ukuze izilwane zethu zikujwayele.
Okokuqala, kungcono ukubeka leash endaweni evaliwe njengendlu yethu bese uyiyeka iqhubeke nayo.
Ungayidonsi, kepha kungcono ukuthi isilwane siye ezingcingweni zakho naku-leash ukuze sikwazi ukujwayela.
Uma usengaphandle, kufanele umqondise ngaso sonke isikhathi ukuze enze lapho usho khona, kepha ugweme ukudonsa esishilo.
Zonke izinyathelo azenza kahle, kufanele umdumise, ngenkathi eqhuqha noma enza okuphambene, sizokugwema ukusondela futhi simtotobise ngaleso sikhathi ukuze aqonde ukuthi kukhona okungahambi kahle.
Lapho i-leash iqinile futhi inja iyadonsa, sukuma bese uqhubeka lapho uyibona ikhululeka kakhulu.
Kufanele qala ukuhamba nge-leash emfushane futhi uma isilwane sethu singagijimi, lapho-ke singakwazi ukukhulula intambo ethe xaxa. Kuyindlela yokuhlala uhlala ulawula.
Uma inja yakho iqala ukuhlafuna leash, ngakho-ke kungcono ukuyilahla ngokushintsha inkambo noma ukuyivula. Uzozwa ukuthi kukhona okuguqukayo lapho wenza leso senzo.
Ukumklomelisa ngemiklomelo njalo lapho enza okuthile okuhle njengokuhamba ngakithi futhi ukubamisa ngaphandle komvuzo lapho edonsa ibhande, ngamanye amaphuzu akhishwe kakhulu.
Kufanele siqale nini ukusebenzisa ibhande lokuqeqesha?
Lokhu futhi kwenzeka ezimpilweni zethu ngakho-ke, kulokho okufuywayo, bekungeke kushiywe ngemuva. Iqiniso ukuthi lapho uqala ngokushesha, kungcono. Ngoba uzobona leyo miphumela oyilindele ngaphambili. Ngakho-ke, ngalokhu sikukwazisa ukuthi uma unomdlwane onezinyanga ezimbalwa, uqala ngokuqeqeshwa.
Kuyiqiniso ukuthi uzokwenza ekhaya, umenze ajwayele intambo, njll. Kepha kancane kancane, uzophinde futhi uwusebenzise lapho usemgwaqweni nakuma-oda esishilo ngaphambili. Udinga ukubekezela okuningi, imiklomelo eminingana noma imivuzo nesikhathi sokuyithola. Kodwa-ke, kuzoba lula ukwedlula uma uqala lapho isilwane sesikhulile.
Ungathenga kuphi i-leash yokuqeqesha inja
Elinye lamaphuzu amahle kakhulu we-Amazon ukuthi uma ufaka iwebhusayithi yabo, ungajabulela i- anhlobonhlobo amathuba. Lokhu kusho ukuthi izintambo zokuqeqesha zizobe zikhona zonke. Kusuka kokuqedile ekubunjweni kwayo, kuya kumbala ocishe ufane noma wesiteleka, ubude obuhlukahlukene futhi, namanani ahlukile. Okusho ukuthi ungahlala ukhetha okulungele wena nenja yakho.
Akakwazanga ukuphuthelwa ukuqokwa kwakhe uKiwoko ngoba futhi kungenye yalezo zitolo ezisinikeza konke esikudingayo ezifuywayo zethu. Kulokhu, uzoba nemichilo emihle kakhulu, kusuka emfushane kuya kokulula ngokusebenzisa i-rubberized noma izibambo. Umhlaba wonke ulungele ukuqeqesha inja yethu ngendlela ethokomele.
Zombili izintambo zenayiloni, ezingesinye sezijwayelekile, futhi ezakhiwe ngesikhumba, izophinde ibe seTíanimal. Kepha hhayi ngenxa yokuhlukahluka kwayo kuyalulekwa, kepha futhi ngoba uzoba nayo ngemibala ehlukene futhi ngamanani entengo aphansi kakhulu, phakathi kwawo okuhlala kunikezwa okungajwayelekile. Manje yisikhathi sokuyisebenzisa ngokunenzuzo!
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Ukuziqeqesha » Ibhande lokuqeqesha
Ibhodlela lamanzi enja